Internet Download Manager 6.12 Build3Beta ~ မိုးညိုသား
2:55 AM နည်းပညာ( ကိုညီနေမင်းစီက ယူလာတာပါ), ဆော့ဝဲလ်များ No comments
တောင်းထားတာတွေ အားလုံးထဲက IDM ကို ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. အထဲမှာ patch ဖိုင်ပါပါတယ်. အခု patch က လွယ်ပါတယ်။ first name နဲ့ last name ပဲ တောင်းပါတယ်။ ကဲအားလုံးပဲ အဆင်ပြေ လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါ တယ်။ တောင်းထား တာတွေကိုတော့ Download လုပ်ထားပြီးပါပြီ. တင်ပေးဖို့ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ Download လုပ်ပြီးတာနှင့် ပထမဦးစွာ .rar ပြောင်းပြီး extract လုပ်ပါ. လျှို့ဝှက်နံပါတ်မေးရင် ကျွန်တော်အီးမေးလ်လိပ်စာကို ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ရပါပြီ။ ကိုညီနေမင်း@ဂျီမေးလ်ဒေါ့ကွန် နော်. အဲ့ဒါကို အင်္ဂလိပ်လို ရိုက်ထည့်ရမှာ။ ဒီလောက်ဆို သဘောပေါက်မှာပါ။